လူတွေထက်အင်တာနက်ကပိုကောင်းတဲ့အချိန် (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်က Porn On
မကြာသေးမီက“ Dilbert” နောက်ကွယ်မှပါရမီရှိသူစကော့ဒမ်အဒမ်ကခေါ်သောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုရေးခဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် crossover။ ကောက်နုတ်ချက်ပါ
အဆိုပါပုံရိပ်ကမ်ဘာပျေါတှငျလိင်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား ... အစစ်အမှန်အရာထက်ပိုကောင်းဖြစ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်မည်သူမျှကုန်ကျစရိတ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်သည်စွဲလမ်းမှုပိုမိုများပြားလာသော်လည်းလူသားများသည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလာမည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောရှေးရှေးများအတွက် crossover ပြီးသား .... အင်တာနက်သည်သင်၏အလိုဆန္ဒများကိုပိုမိုတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ကျွေးမွေးရန်သင်ယူသည်နှင့်အမျှသင်၏စွဲလမ်းမှုပိုမိုပြင်းထန်လာလိမ့်မည်။
သူက crossover ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သတိရှိရှိရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကောင်လေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကအတော်လေးဘုံဖြစ်လာတယ်။
၂၁ ရာစု broadband မောင်းနှင်တဲ့ ED ရောဂါအသစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဟာစစ်မှန်သောဇာတိအသွေးအသားနှင့်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးရန်အခွင့်အလမ်းသုံးခုရှိပြီးတစ်ခါတလေကျရှုံးခဲ့ဖူးတယ်။ (ဥပမာ - ဒီအမျိုးသမီးတွေအိပ်ရာပေါ်မှာလဲပြီးသွားဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ အဝတ်တွေလည်းချွတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ) အခြားအခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်၊ တခြားမိန်းကလေးတွေတောင်ကျွန်တော့်အိပ်ရာမှာအိပ်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်ကြားမှာတောင်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့ပြောင်းမသွားခဲ့ဘူး။ ငါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသွားပေမယ့်အချိန်တိုင်းမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှက်စရာ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်သူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကွဲဆက်ဆံသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
အသုံးပြုသူများစွာအတွက်ယနေ့ cyber erotica သည်သက်သေပြသည် ပို. လှုံ့ဆော် algebra အတွက်လာမယ့်သူတို့ကိုထိုင်သူကိုတင်းကျပ်စွာအင်္ကျီအတွင်းမိန်းကလေးများအကြောင်းကိုကူးယဉျထက်။ သို့သျောလညျး, simulated နဲ့ချောကလက်နှင့်စတော်ဘယ်ရီဆိုအဖြစ်အမှန်တကယ်လိင်အဖြစ်လဲလှယ်နေကြသနည်း ဒီတစ်ခါလည်းမဟုတ်-အထူးသဖြင့်တဦးတည်း မှစ. အပျိုဖော်ဝင်စကနေဒြပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဘို့အ opts အခါ။ Pubescent / ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်လိင်နှိုးဆွသမျှမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝါယာကြိုးမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ရှိပါတယ်အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အားဖြင့် နောက်ကျော pruned အသုံးမပြုတဲ့ဆားကစ်.
အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်တစ်နေ့နေ့မှာအစစ်အမှန်လိင်ရှိသည်ဖို့လိုလားသူငယ်ရွယ်မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူမှားအားကစားသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူသို့မဟုတ်သူအပြစ်ကင်းစင်ဘာဦးနှောက်မျှော်လင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တကယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကမ်းလှမ်းမှုများအကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်အတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ input ကိုတစ်မူလတန်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်အင်တာနက်က porn ကို အသုံးပြု. သုံးစွဲနှစ်ပေါင်းပြီးနောက်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အဓိကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလိုအပ်, လ, ကိုမှန်ကန်အိမ်ထောင်ဖက်မှ switch သည်ဖြစ်စေ။ ဒါကတချို့ကျဘာအဘို့အနည်ထိုင်လတံ့သောအလေးသာတိုးပွားစေပါသည်။
အဒမ်၏မှတ်ချက်ပေးချက်အရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် 2D D hotties များသည် D-so-hotties များထက် 3-D ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီယုတ္တိဗေဒအရသင်ဟာဆွဲဆောင်မှုမရှိသူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင် 2D D Hotties တွေဟာသင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖို့အလားအလာရှိတဲ့မိန်းမတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သူကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်အချိန်တိုအတွင်းအကောင်းဆုံးလူမှုရေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများရှိသည့်သူများပင်လျှင်အင်တာနက်မှုတ်သွင်းခံလိင်ဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှစ်သက်သောအားဖြင့်လူ့ဆက်သွယ်မှုကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟုသူကခန့်မှန်းသည်။
သီးသန့်, ဒါမှမဟုတ်အလွန်လေးလံသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုသဘာဝကျကျပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်ပိုကောင်းကြောင်းနိဂုံးမှအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူသာပြင်းထန်မှုနှင့်အရေအတွက်-မဟုတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုင်းတာလေ့ရှိတယ် ခြုံငုံကျေနပ်မှု။ သို့သျောလညျးအခြို့သောအသုံးပြုသူများကိုမှန်ကန်လိင်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက porn အသုံးပြုမှုကိုအပြီးကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုသတိထားမိ:
ကျွန်ုပ်ယောက်ျားသူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ပင်ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအမျိုးသမီးများ၏ဗီဒီယိုများကိုမြင်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သောကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ နာရီအထိယင်းကိုပြုလုပ်ကြသည်ကိုမသေချာပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းအရကျွန်ုပ်သည်နာရီအနည်းငယ်အတွက်စိတ်ချမ်းသာပါသည်။ ထိုအခါမူကားငါသည်စိတ်ပိုင်းငြီးငွေ့မှုခံစားမိသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်၏အိုင်ကျူအိုင်အက်စ်တစ်ဝက်ဖြတ်ပြီးငါမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ငါညဥ့်နက်ပိုင်းတွင်ဤသို့ပြုလျှင်, နောက်နေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအများကြီးပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။ ငါတစ်ချိန်တည်းမှာ porn ကိုကြည့်ခြင်းမရှိဘဲ, ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါရိုးရှင်းစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလျှင်ဤသည်ဘယ်တော့မှမ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအပေါ်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်းသူမ၏သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအချိန်များစွာစိုက်ကြည့်လျှင်ပင်၎င်းသည်မဖြစ်နိူင်ပါ။ (ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးထိုနေ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့လျှင်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖြစ်ပျက်နိုင်သည်) ။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပူသည် 2-D အုပ်စုများမှတကယ့်မိတ်ဖက်များကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ပိုပြီးမိုက်မဲသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဦး နှောက်သည်အမြင့်ဆုံးအတွေ့အကြုံများနှင့်တွဲဖက်သမျှကို (ပြန်လည်) ဝါယာကြိုးအဖြစ်သို့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤသဘာဝဖြစ်စဉ်သည်နောင်အနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုများကိုကျဉ်းမြောင်းစေပြီးလူများအားပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ဒြပ်လှုံ့ဆော်မှုကို ဦး နှောက်ရဲ့“ ငါလုပ်ပြီးပြီ” ယန္တရားများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမအောင်မြင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါ၎င်းသည်နောက်ဆုတ်သွားသည်။ (ကြည့်ပါ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?) အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ပင်စိတ်ဆင်းရဲလက္ခဏာတွေခံရ:
[ပထမဦးစွာကောင်လေး, အသက် 23] ငါစိတ်ဓါတ်များ-မမှန်, အချည်းနှီးသောဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်များကိုနဲ့ကျွန်မ Semi-ခက်ရဖို့ porn ကြည့်နေစဉ် 23 မှာမကောငျးသောအရာ, နှစ်ဦးစလုံးလက်နှင့် masturbate ရန်ရှိသည်မယ်လို့ ED ၏ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့အမှုနှင့်အတူတစ်တော်တော်မကောင်းတဲ့ဦးတည်ဦးတည်ခဲ့သည်။
[ဒုတိယအကောင်လေး, အသက် 20s] အကြှနျုပျ၏ ED ဖြည်းဖြည်း2တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးစတင်ခဲ့ပြီး -3လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း။ ထိုသို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်သိသိသာသာပိုဆိုးဆည်းပူးခဲ့သည်။ ငါမရှိသလောက်နံနက်သစ်သားနှင့်ညစ်ညမ်းအများစုအစိတ်အပိုင်းများကိုငါ့အဘို့ဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့မြင်မယ်လို့ရှိရာအမှတ်ရတယ်။ ကျွန်မအားလျော့ဒစ်နှင့်အတူ FAP မယ်လို့တစ်ဝက်အချိန်။ ငါအလုံအလောက် "ပူ" သောမော်ဒယ် surfing နာရီပေါင်းများစွာလိမ့်မယ်။ အဘယ်ယနေ့ "ပူ" ဖြစ်ခဲ့သည်မနက်ဖြန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဖြစ်ခဲ့သည်။
အဒမ်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကို ဦး တည်နေတယ်ဆိုတာကိုမှန်ကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့စီးနင်းတာကသူမညွှန်ပြထားတာထက်ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးသွားရာနေရာကလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနည်းပါတယ်။
ချိတ်ဆက် / ဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလယ်အလတ်နှင့်တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးကိုအလွန်တန်ဖိုးမထားပါ။ သင်လုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အမှန်စင်စစ်အဒမ်ကဆိုက်ဘာဗီဒီယိုများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မိန်းမပျိုများသည်“ သူတို့၏ဂိမ်းကိုအရှိန်မြှင့်” ပြီးဖြစ်သည်ဟုသူကထောက်ပြသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်ဆက်ဆံမှုသည်ရရှိနိုင်သမျှအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝယူဆချက်ရှိသည်။
သို့သော်ရည်းစား / ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည်နောက်ဆုံးတွင် ဦး နှောက်ကိုပိုလျှံသောအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ငါတို့နည်းနည်းရှိရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိသွားနိုင်တယ် နည်းသော ကျွန်ုပ်တို့နာတာရှည် overconsumption ဒီလောက်စွန့်နေကြသည်ထက်ကျနော်တို့ချင်ထင် (သို့သော်ချစ်ခင်ထိတွေ့အများကြီး) ထက်လိင်။
ပိုးပန်းခြင်းအပြုအမူ၏“ အဆင်မပြေမှု” သည်အောင်မြင်မှုရှိခြင်း၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်သောရေရှည်စုံတွဲဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ပုံမှန်ချစ်ခင်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်နီးကပ်, ယုံကြည်စိတ်ချအပေါင်းအဘော်၏အာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအများကြီးရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိရန် -
Long-Term ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တစ်ဦးကရှားပါးဖြစ်ရပ်ဆန်းသန်းပိုရှိပါသလား? ဒီတော့မှန်လျှင်, ၎င်း၏ဆက်စပ်ဘာတွေလဲ?
စုံတွဲများ '' အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုမှဆက်ဆံရေး: ရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှု၏ကနဦးအဆင့်စဉ်အတွင်း oxytocin
အိပ်မပျော်အတွက် Interpersonal အချက်များ: အိပ်မပျော်များအတွက်သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံးသို့အိပ်ရာမိတ်ဖက်ပေါင်းစပ်များအတွက်တစ်ဦးကမော်ဒယ်
ငါးနိုင်ငံများအတွက် Midlife နှင့်အသက်ကြီးစုံတွဲများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှု
hotness အားဖြင့်ဖျားယောင်းကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ချစ်ခင်ထိတွေ့ဖလှယ်ဘို့သာယာဝပြောရေး၏ခံစားချက်များကိုနှင့်ကျွန်တော်လိုအဖော်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုဆုချဖို့ပြောင်းလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလျစ်လျူရှု။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများ Anti-စိုးရိမ်စိတ် meds အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဆနျ့ကငျြတစ်ယောက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုသာရေတိုရေရှည် buzz ကမ်းလှမ်းများနှင့်အလွန်အကျွံပုပ် feeling ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာနိုင်သည်
[ခေတ် 29] လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်၌သူငယ်ချင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ ထွက်သွားလေ့ရှိတယ် လမ်းပေါ်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ပစ္စည်းတွေဘယ်တော့မှမလိုအပ်ဘူး။ ဒါဟာရှေ့တန်းအားလုံးငါ့ကိုစောင့်ရှောက်သောပြည်တွင်းရေးခံစားမှု ... ထိုစွမ်းအင်ကို ... ကုန်ကြမ်းစွမ်းအင်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အလေ့အထဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါကြောင့်ကြောင့်မည်သည့်ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်း ... အလုပ် ... ပရောပရည် ... ယုံကြည်မှု။ အားလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကဤညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုဖျောက်ပစ်သောအခါ၊ ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အကူအညီပဲ။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲသူမမုဒိမ်းမှုမြင်ကွင်းများ, တိရိစ္ဆာန်များ, အကြမ်းဖက်လိင်မှဆိုးရွားလာ ကြာမြင့်စွာကတည်းကငါ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်မြင်ကွင်းများစိတ်ကူးဖို့မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်မမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်မလိုအပ်ဘူးကိုအရမ်းဂုဏ်ယူတယ် “ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ။ လူတွေကကတိက ၀ တ်ပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသွားဖို့တကယ်မိုက်မဲသူတွေပါ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြား ... !!! ငါ့ကိုကြည့်! ငါကအန္တိမလူသားပဲ။ ငါတယောက်တည်းနေနိုင်တယ်။ ”
ဒါပေမယ့်လုံးဝမှားခဲ့ပါတယ် porn ကငါ့ကိုအထဲမှာကနေစားခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲငါစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ ဦး နှောက်မြူ၊ အကြှနျုပျ၏စရိုက် ဦး နှောက်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ငါ porn နှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီခြားနားချက်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။
ပွဲနေသော်လည်းလူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း pair တစုံ-bonding မျိုးစိတ်။ နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ် 97% မတူဘဲငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလဲပေးနိုင်ပါတယ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်စက်ယန္တရားရှိသည်။ (ကြည့်ရှုပါ Bonobos မကောင်းပါအခန်းက္ပ & Models Make အဘယ်ကြောင့်။ ) Pair ကို-Bond နို့တိုက်သတ္တဝါများယေဘုယျအားဖြင့် Bond အပြုအမူတွေ၏အစားရံဖန်ရံခါလိင်မဆက်မပြတ်လိင်နှင့်အတူမကြာခဏ Bond အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ (ကြည့်ရှုပါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မျောက်-စတိုင်အတွက်တည်းခို.)
ကျွန်ုပ်တို့၏အတန်ငယ်ထူးခြားသောစုံတွဲ-bonder စက်ယန္တရားပုံလိင်ကနေစံချိန်တင်မြင့်တက်ထွက်ရှိသော arousal အရောအနှောကနေလာဆိုထားသည် နှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းစသည်တို့မှနွေးထွေးသောခံစားချက်များ။Bond အပြုအမူတွေ"(စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအထောက်အကူပြုသည့်) ဦး နှောက်ကိုသက်သာစေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သာယာဝပြောမှုကိုပိုမိုတိုးပွားစေသည်။
ဒီတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းကတော့ supernormal လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမရှိရင်ငါတို့ရဲ့ built-in လိင်ကန့်သတ်ချက်တွေကငါတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ ပင်တစ်စုံ-Bond အစီအစဉ်ကို ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်, ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာ နောက်ထပ် စိတ်ကျေနပ်မှုခြုံငုံ? ဆိုလိုသတည်းတစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောချိန်ခွင်လျှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Bond အပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးရောနှော အသုံးပြု. အိမ်ထောင်ဖက်မှပူးတွဲ (ကပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) ကိုအစောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်ပြောင်းလဲခြင်းရှိသနည်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမယုံကြည်မှုမှပံ့ပိုးရမည် overdoing ရနိုင်ပါသလားနှင့် မကျေနပ်မှု ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုထက်ပိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြသည်မဟုတ်? ဒါဟာအယူအဆရို့ကားအသံစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်, တကယ်တော့, အမျိုးသမီးတစ်ဦးသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းသတင်းပို့ နာတာရှည်စိတ်တိုတာတွေ နှင့်လိင်အပြီးမျက်ရည်ကျ။ လူတို့သညျလညျးအပြီးစိတ်ဓါတ်များယိုယွင်းပျက်စီးလာရင်ဆိုင်ရစေခြင်းငှါ အလွန်အကျွံသုတ်ရည်လွှတ်။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြပမာဏကိုကျော်လွန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ချစ်ခင်လူ့ထိတွေ့ဘို့ငါတို့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံတစ်ခုလုံလောက်သောအလုပ်လုပ်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအချက်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဝမ်းသာစရာကဒီနေ့ကတစ်ယောက်ယောက်ကသော့ခတ်နေတယ်ဆိုရင် အစဉ်အဆက်ဝတ္ထုဆိုက်ဘာ erotica နှင့် လိင်ကစားစရာ, သီးသန့်ဆက်ဆံရေးတစ်ဖန်အများအပြားလူကြီးများများအတွက်လုပ်ကိုင်နိုင်သော option ကိုဖြစ်လာပေမည်။ သင်တန်း၏, ဒီခြေလှမ်းဟာပါဝငျနိုင် unhooking ၏အဆင်မပြေ dopamine-cranking မှ၊အသစ်အဆန်း-အဖြစ်-aphrodisiac"မဟာဗျူဟာသည် Web ပေါ်တွင်လေ့လာသင်ယူအဖြစ်အချို့သောလူကြိုက်များယူဆချက်ဘေးဖယ်ထားဖို့စိတ်အားထက်သန်။
စကားမစပ်, ပိုသဟဇာတသေချာပေါက်မဆိုလိုပါ နည်းသော လိင်ဒါပေမယ့်ရှာဖွေစူးစမ်းဆိုလိုခြင်းငှါ lovemaking ချဉ်းကပ်မှု ကြောင်းလည်းမကြာခဏ Jolly နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ neuroendocrine ချိန်ခွင်လျှာအလွန်အမင်းမပါဘဲ Bond အပြုအမူတွေကနေတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည့်စိတ်ကျေနပ်မှုအမြင့်ဆုံး။
ထိုကဲ့သို့သောညှိနှိုင်းမှုကျိုးနပ်ပါသလား “ Digital Crossover” သည်နောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုအဖြစ်သင်မည်မျှနှစ်သက်ဖွယ်ရှိသည်ကိုမူတည်သည်။ စကားမစပ်, ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုရှိရာသို့အလျင်အမြန်ထင်သည်ထက်ရှိစေခြင်းငှါ။ လူတွေဆိုလျှင်အဒမ်၏အဆိုအရ
ပိုမိုမြန်ဆန်။ အငြင်းပွားမှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာရန်ဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်။ Digital Crossover သည်ဆယ်နှစ်မပြည့်မီတွင်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူ။ “ asexuality” တွင်ဂျပန်၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်မြင့်တက်လာသည့်“ Dating Sims” ၏အခန်းကဏ္ play နှင့် ပတ်သက်၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာစီစဉ်ထားသောဗွီဒီယိုသည်။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 30 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ, fအဆိုပါစာရင်းထဲတွင် irst5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 60 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ (အမျှဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ )